Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Seychelles Madagascar Malgache » Topi-maso kely any anaty vilany fandrendrika Seychelles
Seychelles vilany miempo
Firenena malemilemy 250 taona monja, ny Nosy Seychelles dia manana lova be dia be, avy amin'ny kaontinanta Africa, Europe ary Asia. Raha mifangaro ao amin'ilay antsoina ankehitriny hoe kolontsaina kreôla Seychellois, ity vilany fandrendahana ity dia mahasarika ny mpitazana amin'ny tantara, kanto, sakafo, dihy ary fiteny samihafa.
Tany am-piandohan'ny taonjato faha-17 no nipetraka voalohany, ireo nosy dia nahaliana foana nandritra ny taona maro.
Androany, any ankoatry ny rano madio mangarahara sy ny morontsiraka fotsy misy perila, dia azo antoka fa hahasarika ireo mpitsidika azy ireo firavaka tena izy any amin'ireo nosy madio.
Miaraka amin'ny fakany mitsimoka avy amin'ny kaontinanta telo, ny kolontsaina kreôla Seychellois dia mbola hita taratra ny niandohany.
Miroboka amin'ny gadona taloha
Ny fitaomana afrikana dia mbola eo amin'ny gadona mozika kreôla, miaraka amina feon-teny mafonja milaza ny tantaran'ny razambeny andevo izay nampiasa mozika hialana amin'ny olana androany. Notarihin'ny afo nirehitra ny andevo afrikanina, ka nahita ny tenany nifindra tamin'ny fikapohana amponga sy fantsom-peo, fanao iray izay nampitaina ary azo zahana manerana ny nosy indraindray.
Ny "moutya" sy "sega" dia sasany amin'ireo dihy bonfire malaza indrindra entanin'ny razamben'izy ireo afrikanina, arahin'ny vatan'ny eropeanina misy dihy "kanmtole" ara-dalàna kokoa toy ny "kontredan," "kotis", "mazok, ”Sy“ valz. ” Ny dihy mavitrika miaraka dia gadona mavitrika miaraka amin'ny gadona gadona, ary ny feon-kira matanjaka, tsy miovaova, staples an'ny mozika kreô izay nitana ny ankamaroan'ny fitaomana tany am-boalohany.
Mbola velona ianao anio, dia afaka mahita ny hafalianao amin'ny gadona sy ny fihetsehana eny amoron'ny fasika mandritra ny ora volamena sy amin'ny hetsika ara-kolontsaina toy ny Festival Kreol fanao isan-taona amin'ny volana Oktobra.
Raiso ny lanilaninao amin'ny fitsangatsanganana gastronomical
Tsy ny dihy sy ny mozika ihany no singa manaitaitra ny mpandeha; ny nahandro kôkôla dia miteraka fahatsapana maharitra eo amin'ny lanilanin'ny olona iray, manintona ny tsirony amin'ny tsiro mipoitra miaraka amin'ny zava-manitra mafana sy ireo akora vaovao. Ny nahandro kreôla dia zavatra iray mijanona ho iray amin'ireo lafiny mahaliana indrindra amin'ny kolotsaina eo an-toerana.
Manodidina ny vazana rehetra amin'ny nosy dia azo zahana ny manaikitra eo an-toerana rehefa manadihady ny sasany amin'ireo zava-mahatalanjona voajanahary maro ao amin'ny nosin'ny nosy izay ahitanao ireo akora ilaina amin'ny lovia vita amin'ny creole. Ireo tranonkala manan-tantara toa an'i Jardin du Roi aza dia manolotra fitsangantsanganana toy izany izay miafara amin'ny lovia an-trano ao amin'ny kafe hafahafa voahodidin'ny bitsibitsiky ny natiora mahafinaritra.